SIDA LOO SOO SAARO GODADKA KHUDAARTA EE GURIGA - BEERTA
Qof kasta ugu yaraan hal mar noloshiisa, gaar ahaan carruurnimada, dhagaxyada dhulka lagu aaso. Koorsada waxay ahaayeen liin, liin, tufaax. Waxay koray sprouts, taas oo xataa siiyey dhowr caleemo. Laakiin ka dib dhowr bilood ka dib, midabka ama baadiyaha ayaa ku koray caleenta oo buuxa, oo aan midho dhalin dhammaan. Ma taqaanaa sida loo koro khudaar ka sameysan dhagax guri? Waxaa laga yaabaa inaad isku dayday inaad mar hore sameyso, laakiin tijaabadaada ugu badan ayaa ku guuldareysatay. Sidaas waliba tani waa adiga. Haddii aadan xataa isku dayin, markaa maqaalkani wuxuu kaloo kuu noqonayaa mid xiiso leh: waxaad baran doontaa waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad uhesho geed canab ah oo cufan leh.
Xulashada iyo diyaarinta wax beerto
Waxaad ubaahan tahay inaad ku koriso khudaar ka soo lafaha geedku ku korayo aaggaaga. Haddii aysan jirin wax suurtagal ah in la helo, markaa waa inaad amar ka sameysid badeecooyin ku nool xaaladaha cimilada ugu daran. Kaymaha sii kordhaya waxaa ku filan in ay ku filnaato oo ay ku noolaan doonto xaalad kasta oo cimilada ah iyo gees kasta oo dalka ka mid ah. Doorashada saddexaad waa in laga tago dhagax laga soo iibsaday midhaha suuqa ama dukaanka. Kaliya ha u qaadan noocyo shisheeye oo shucaac ah, maadaama ay noqon doonaan mid aad u dhib badan si ay u koraan.
Waa muhiim! Dooro reproducing kaliya abrikot ugu wanaagsan. Waa inay noqdaan wax yar oo ka baxsan oo leh qashir fiican oo kala gooni ah.
Ka hor inta beerto miraha khudaarta, waa in si wanaagsan loo dhaqo oo la qalajiyaa meel gudcur ah. Waa in aan lagu beerin dheriyada, sababtoo ah waa inay ku dhacaan nooc "tababarka dagaalka." Geedo in lagu kori doono guriga, isla markiiba u dhintaan bilawga ah ee dhaxan ugu horeysay, sida ugu dhakhsaha badan aad iyaga ku tallaali dhulka u furan. Laakiin waa in aynaan xisaabin xaqiiqda ah in dhammaan geedo ay koraan sariirta, maadaama xilliga qaboobaha uu ka baxayo oo keliya kan ugu xooggan uguna adkaysi badan. Laakiin haddii khudaarta cagaaran laga beeray dayrtii hore, badankood waxaa lagu cuni doonaa jiirka. Tani waxay ka dhigan tahay in shuruudaha ugu fiican ee beerto ay noqon doonto mid-xilliga dayrta, marka dhulku uusan weli barafeynin, ama badhtamaha.
Ka hor inta beerto miraha khudaarta xilliga dayrta, waxay u baahan yihiin in laga buuxiyo biyo maalin. Habkani wuxuu cadeeyn doonaa cidda ay yihiin kuwa cilladaysan oo aan ahayn, maadaama ay tayadoodu hoosayso. Dhagaxyada xayawaanka ah waxay u baahan yihiin in lagu dhex daro lix xabbadood oo qoto dheer iyo masaafada 10 cm mitir kasta. Natiijada ka soo baxda inaad ka soo baxday filashooyinkaaga, waxay ujirta u baahan tahay in la xoojiyo waxoogaa ka badan, iyo isku dar ah dhulka, caws, humus iyo ciid waa in lagu dhejiyaa hoosta. Waxa kale oo lagugula talinayaa in la bacrimiyo lafaha kor ku xusan ee cawska iyo humus. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, khudaarta ka soo dhagaxa ah ayaa la marin doonaa adag oo dabiiciga ah, iyo guga ayaa siin doona caleemaha ugu horeeya.
Haddii aad dib u dhigto xilliga gu'ga, lafaha waa in la mariyaa qaabaynta. Waxaa lagu dhejin karaa sanduuq adag oo qaboojiyaha loogu talagalay jiilaalka oo dhan. Waxaad qaadan kartaa lafaha qalalan bartamaha Maarso oo biyo ku ridi saddex maalmood, oo u baahan in la beddelo maalin kasta. Ka dib markii loo baahdo in la soo dego waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo ciid qoyan iyo meel dhigo Maqsin. Bishii Abriil, lafaha waxaa lagu beeray ciidda furan sida ugu dhakhsaha badan xaaladaha cimiladu u oggolaadaan.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa abrikot waxaa lagu xusay diiwaanada 4000 BC. Waddanka geedka this waa Ermeniya ama Shiinaha. Ka dib markii uu ka soo muuqday Faaris iyo Mediterranean. Giriigga midkan midho keeno Alexander of Macedon. Laga soo bilaabo halkan wuxuu bilaabay inuu ku faafo guud ahaan Yurubta.
Waa maxay carradu ku habboon yihiin khudaarta?
Carrabka ugu fiican ee ku habboon beeritaanka abuurka khudaarta waa loamy ama wax yar oo loamy ah. Karbonaatka hooseeya sidoo kale waa ku habboon yahay. Qiimaha pH waa inuu u dhexeeyaa todoba iyo siddeed. Laakiin waxaad isticmaali kartaa carrada kale. Waxa ugu muhiimsan waa in ay leeyihiin muuqaal nalalka ah, ha ku jiraan cusbada sunta ah waxayna aad u xiran yihiin.
Carrabku waa inuu lahaadaa hawo wanaagsan iyo dheecaan. Margooyinku waxay u dulqaadanayaan muddooyin qalalan, laakiin marka qoyan, ciidda si weyn ayay u koraan waxayna siinaysaa wax-soo-saarka hodanka ah. Qodobka la beero khudaarta waa inaysan ku dhicin dhulka hoostiisa. Tan iyo markii la helo urur hawo qabow, taas oo si xun u saameyn karta sii kordhinta dhirta.
Shaqo diyaargarow waa in horey loo maraa. Lakabka ugu hooseeya ee dhulka waa inuu ka soo baxaa bullaacad, laga bilaabo korka waa in la rusheeyaa humus iyo Bacriminta macdanta, ash iyo amooniyam. Si looga hortago gubashada xididdada, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso muraayada lime horay. Waxay ku qalalan yihiin xididada sida hab aan u jirin xiriir la Bacriminta. Foosto miir ayaa loo baahan yahay in la beeray heer sare ah, xididada waa in loo booriyaa qoorta geedka. Hareeraheeda hareeraheeda waxaad ka samaysaa god yar, oo aad u baahan tahay inaad buuxiso laba baaldiyo oo biyo ah. Khudaarta khudaarta qaarkood waxay hoos u dhigaan si ay u helaan kuleylka dhulka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku hagaajisaa laanta xagasha ee ugu yaraan 45 digrii.
Lafaha Beerta xilliga dayrta (dhirta dabiiciga ah)
Haddii lafaha looma qorshayn in lagu beeray dhul furan isla markiiba, ka dibna way sii haynayaan illaa dayrta. Waa in lagu beeraa dayrta goor dambe oo leh bilawga ah ee miraha ugu horeeya. Beeridda lafaha khudaarta ee dayrta waa in la sameeyaa kadib dabiiciga dabiiciga ah. Dhammaan lafaha waxaa la dhigaa biyaha oo waxay ka tagaan oo keliya kuwa hoosta ku jiifa. Marka xigta, u diyaari godad si qoto dheer ee xayndaabka xayawaanka. Faafidda humus, chernozem, cawska iyo ciidda hoose. Marka ay ku sii socoto dusha shan sentimitir, waxaad dhigi kartaa dhagxaan khudaar ah. Ku dabool cawska iyo humus ka sareeya, laakiin ma samayn kartid, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad adkeyso oo aad aqoonsatid dhirta jilicsan ee jiilaalka. By May, geedo hore u koray noqon doonaa muuqaal. Dhirta dhalinyarada kale oo dheeraad ah waxay u baahan yihiin in si taxadar leh loo ilaaliyo, ka ilaalinta cayayaanka illaa dayrta, illaa qalliinka si meel joogto ah.
Ma taqaanaa? Maanta, waxaa jira ilaa labaatan nooc oo abrikot ah. Dhulka waa mid madow. Waxay u muuqatay inay sabab u tahay isku-buufisashada khudaarta iyo khudradda cherry.
Lafaha beerto ee guga (strateification macmalka)
Waxaad bilaabi kartaa abortiska abbaaraha dhexe ee guga - in April. Si ay abuurka si fiican u diyaargaroobaan beeritaanka guga, dhamaadka Janaayo waa in la geliyaa sanduuqyada ama taangiyo qoyan oo leh ciid qoyan. Oo waxaa fiican in prikopat beerta dhulka, kaas oo barafoobay, ilaa guga. Xaaladdan oo kale, cirifka cayayaanka khudaarta ayaa noqon doona midka ugu dabiiciga ah. Haddii aadan runtii rabin inaad ku jilciso beerta xilliga qaboobaha, waxaad sanduuqyadaas ku dhejin kartaa dhulka hoostiisa ama qaboojiyaha, halkaasoo heerkulku si joogto ah ugu hayo wax ka badan laba heerka Celsius. Foomkan, waa in la keydiyaa ilaa guga iyo si joogto ah u hubi qoyaanka ciidda. Dabayaaqadii Abriil, lafaha ayaa lagu beeray ciidda furan si la mid ah sida ku dhajinta deyrta.
Daryeelka caleemaha bisil
Sida aad horay u ogtahay sida loo dhalan karo miraha khudaarta, hadda caleemaha ugu horreeya waxay u baahan doonaan in laga ilaaliyo ka hortagga kala duwan ee shimbiraha, cayayaanka iyo jiirka. Caleemaha jilicsan ayaa ah raaxo jecel, sababtoo ah waxay leeyihiin nafaqooyin badan iyo fara badan oo fiitamiin ah. Waxaa jira hab weyn oo lagu ilaaliyo sprouts iyaga oo ku daboolaya dhalooyin caag ah oo laba laadir ah. Taas awgeed, qof ayaa gooyaa meesha ugu hooseysa dhalada ee goobada, iyo qof kale iyo qoorta. Si aad u fahamto habka ugu fiican, waxaad u baahan tahay inaad tijaabiso. Badbaadada hoyga ayaa ah qaabka ugu horeeya, inta soo hartay - labaad. Ka dibna daryeeli khudaarta khudaarta si la mid ah sida geedo lagu iibsado xarumaha beerta ama xannaanooyinka. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la siiyo khudaar badan oo leh qorrax cad, kakan oo ah macdanta iyo Bacriminta organic iyo waraabinta wanaagsan.
Ma taqaanaa? Saddex abrikood oo cusub, oo cuno qof maalin kasta, waxaa ku jira 30% oo ah maalin kasta oo lagu talinayo beta-carotene. Xitaa markii ugu horeysay ee dayaxu, Apollo astronauts waxay cuneen abrikot qallalan, sida ay ku jiraan 40% sonkor iyo qadar xoog leh oo tamar ah.
Geedo ku-tallaalidda si meel joogto ah
Maadada khudaarta ma aha shaqo fudud, sababtoo ah sifooyinkaas, waa in la tixgeliyaa haddii aad rajeyneyso in geedku uu si fiican u dhisi doono meel joogto ah. Mid kasta oo ka mid ah geedo waa in si taxadar leh loo baaro wixii khasaare ah ee cayayaanka iyo cudurrada oo dooro kuwa ugu fiican. Dhowr saacadood ka hor transplanting, loo baahan yahay seedling si fiican u waraabiyo, si nidaamka xididka ayaa si aad u qoyan, sida waa dhulka ku wareegsan. Sidaas awgeed waxaad xididdada ka soo saari kartaa barar dhuleed, taasina waxay ku siin doontaa nabadgelyo ammaan ah.
Dabcan, waxaad dhigi kartaa xididada, laakiin tani waa qiime dheeraad ah, waana in lagu sameeyaa taxaddar aad u badan, haynta hababka ugu yar ee nidaamka. Wareegga Pristvolny, kaas oo la mid ah dhexroorka taajka, qashinka, ka sameysma geedka qulqul yar yar si qoto dheer ah 80 sentimitir. Baahida noocan oo kale ah waxay noqoneysaa dib-u-celin, sababtoo ah xididada ugu muhiimsan waxay noqon doontaa mid aan dhaawac ahayn. Caleemaha mudada dheer waxaa la googooyi doonaa isha. Ka dibna, adigoo isticmaalaya qoryaha, waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah ugu dhajiso qulqulka dhoobada leh nidaamka asaasiga ah iyo u gudub gidaarka ama jeexa si aad uhesho qaabkeeda. Haddii seedling u baahan tahay in la geeyo meel, ka dib marka ka saaridda waa in la gelin lakabka cufan ee sida balka.
Beerto cusub ee khudaarta loogu talagalay waa la diyaariyaa horay. Tusaale ahaan waxay ku qodbeen qaliinka transplantation xilliga dayrta, laakiin xilliga dayrta - bil gudaheed. Ceelku waa inuu noqdaa qiyaastii laba jeer ka ballaadhan taajkii geedka. Sidaa awgeed xididdadu waxay heli doonaan meelo dheeraad ah oo bilaash ah. Darajada waxay ku xirnaan doontaa da'da seedka iyo xaddiga nidaamka asalka ah.
Waa muhiim! Meeshu way ka fiican tahay in la doorto dhinaca koonfureed ee beerta beerta, sidaas awgeed waa sidii loogu talagalay in laga ilaaliyo qoraalada.
Haddii dhulka dalaggu uu yahay mid aad u raaxo badan oo culus, waxay u baahan doontaa inay shaqeyso. Qeybta hoose ee ceelka waxaa lagama maarmaan ah in lakabka lafdhabarta ee lakabka qoyan iyo burburka, ka dibna ku shub lakabka sodka lagu qasi karo humus. Waxaa jira ikhtiyaarro: ha ahaato tiro badan oo bacrimin ah oo hoos marisa khudaarta, ama daloolin daloolka ballaaran si ay xididada u helaan nafaqooyin ka badan ciidda.
Waa faa'iido leh in lagu daro pound of superphosphate iyo laba boqol oo garaam oo amooniyam ah oo ceel. Haddii dhulku ka badan yahay acidic intii loo baahnaa, hal kilo oo lime ah ayaa lagu daraa. Wixii carrada dhoobada ah, bacriminta laga soocay dhoobada gaduudka, peat iyo ciid ayaa loo isticmaalaa marka loo siman yahay is le'eg. Geedka waxaa la dhigayaa ceelka si adag oo qumman haddii ay ku jirto jilitaanka dhulka. Haddii nidaamka xididka uu furan yahay, markaa xididdada ayaa toosan oo si tartiib ah loogu daboolay dhulka. Si aad u jebiso dhulka ma aha mid u qalantaa, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso geedka.
Ka dib markii la beero waxay ku wareegsan yihiin hareeraha khudradda dhulka oo biyaha ka ilaalin doona inay ku faafaan aagga asalka ka dib markaad waraabiso. Oo waxaa lagama maarmaan ah in ciidda qoyan si aad u badan. Xilliga koowaad ka dib markaad geedka geedka geynayso meel joogto ah, waxaa lagama maarmaan ah in ay si xoog leh u waraabiso, si tartiib tartiib ah u yareyso qadarka biyaha. Kobaca nidaamka xididka waa inuu hoos u dhigaa ka hor bilowga xilliga jiilaalka.
Khamrigu waa in uu si fiican u waraabiyo ka dib marka midhaha la gooyo si loo soo celiyo xoogga geedka geedkii ku bixiyay Bisaylkiisa.